Fiarahamonim-pirenena Kyrgyz Manery Ny Tànan’ny Parlemanta Hiroso Amin’ny Fanentanana #Seza120 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2015 16:05 GMT
Fanangonana ireo sarin'i Twitter, eo ambanin'ilay tenifototra #120кресел.
Kyrgyzstan, iray amin'ireo toerana vitsy an'ny Sovietika fahiny ao Azia Afovoany, izay mbola ahafahan'ireo fiarahamonim-pirenena manao fanovàna, nirehareha tamin'ny tsara tamin'ity herinandro ity.
Taorian'ny hetsika natao tamin'ny media sosialy, mba hisorohana ny governemanta tsy handany vola mitentina 40.000 dolara eo ho eo, amin'ireo seza vaovao ho an'ny fiantsoana faha-enina ny parlemanta Kyrgyz vao hiditra, namono ny fiantsoana tolobidy ho an'ireo seza ny sampan-draharahan'ny parliemanta ary nanapa-kevitra fa mety tsara ihany ireo seza efa teo taloha.
Ilaina eto ny fisehoan-javatra sasantsasany .
Voalohany, tsy mino ireo Kyrgyz maro hoe efa tena simba tokoa ankehitriny ireo seza mahafinaritra novidian'ny parlemanta tamin'ny taona 2010, araka ny filazan'ny manampahefana iray ao amin'ny parlemanta.
Malaza amin'ny tsy fiakarana any am-piasana ireo solombavambahoaka Kyrgyz, matetika no tsy tonga ny antsasak'ireo parliemantera amin'ireo fivoriana. Midika izany fa tsy niasa firy ireo seza sasany nandritra ny dimy taona.
Faharoa, maro ireo olona niahiahy ny fisian'ny kolikoly manodidina ilay tolobidy amin'ireo seza, ao anatin'ny firenena iray izay zavatra fahita matetika ny fanaovana tsolotra.
Fahatelo, tsy vola kelikely izany 40.000 dolara izany ao amin'ny firenena iray izay manodidina ny 200 dolara isam-bolana ny karaman'ny olona iray.
Ny tenifototra #120кресел no nipoitra ho valinkafatra tamin'ireo vaovao momba ilay tolobidy, izay nandefasan'ireo olom-pirenena Kyrgyz ny sarin'ireo karazana seza sy ireo fanehoankevitra maneso.
Maro amin'ireo sary manindrahindra ilay tenifototra no mampiseho loha mitodika any amin'ilay hantsana lehibe manasaraka ireo solombavambahoaka mahazo tombony be amin'ireo vahoaka tsotra.
Fanangonana ireo sarin'i Twitter, eo ambanin'ny tenifototra #120кресел.
Taty aoriana, nisy valinkafatra mbola manindrona kokoa tamin'ny filazàna ilay hetsika tolobidy: fanangona-ntsonia izay mitombo hatrany ao amin'ny Avaaz.org, mitaky ny governemanta mba hampiasa ilay vola mba hanavaozana ny fitaovana any amin'ireo toerana fikarakaràna ny homamiadana, fa tsy handany io amin'ny seza.
Nanoratra izao ireo tompon'antoka tamin'ilay fanangonan-tsonia, izay efa nahazo sonia 250 amin'ny fotoana anoratana izao:
Ny hamoràn'ny famoahana ny vola mitetina 2,6 tapitrisa soms [manodidina ny 37.000 dolara] avy ao amin'ny tetibolam-panjakana,mba hanatsaràna seza, dia manome soso-kevitra hoe mbola manana fanantenana ny hahazo fikarakaràna tsara ihany ireo mararin'ny homamiadana eto amin'ny firenentska. Mila mampiasa ny volam-bahoaka am-pahendrena tsara fotsiny ianareo.
Tsy nandalo tsy voatsikaritr'ireo media iraisampirenena akory ilay hetsika mitabataba be, niafara tany amin'ireo Vaovaon'ny BBC, avy tany amin'ny bilaogin'i Elsewhere.
Bektour Iskender, niara-nanorina ny Kloop.kg, sehatra media eo an-toerana ho an'ny tanora, , nilaza fa fandresena ho an'ireo vahoaka eo amin'ny sehatry ny sampandraharaha ny fanapahankevitry ny parlemanta hanafoana ilay tolobidy ho an'ireo seza:
Одна из лучших новостей недели и маленькая победа гражданского общества над дуростью некоторых парламентских идей. Надеюсь, что далеко не последняя подобная победа.
Iray amin'ireo vaovao tsara tamin'ity herinandro ity, ary fandresena kely ho an'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny hadalàn'ny hevitra parlemantera sasany. Manantena aho fa lavitry ny fandresena farany amin'ny karazany toy izao io.
Roa taona lasa izay, nanao fandrakofana mikasika ny karazana fanentanana mitovy amin’ izao tany Kazakhstan ny Global Voices, izay valinkafatra ho an'ny sotasotan'ny ministera tamin'izany, raha niady hevitra momba ny volavolan-dalàna hampiakarana ny taonan'ny fisotroan-drononon'ireo vehivavy ny parlemanta Kazakh. Nahatonga fanovàna tamin'ilay volavolan-dalàna ilay hetsika, fa mbola manohy mieritreritra ny hampiakatra ny taonan'ny fisotroan-dronono ihany ny governemanta taty aoriana.
Tamin'ity herinandro ity, nijery ny andraba iray tao amin'ny Aterineto hiarovana ireo tranobe ao Dushanbe, renivohitra Tajik, ny Global Voices, izay hita ho tsy hahazo rariny ao amin'ilay firenena izay iatrehan'ny hevitry ny olom-pirenena ny habaka ara-politika hety dia hety tokoa ary tsy afaka idirana intsony, .
Indrisy, any amin'ireo faritra ao amin'ireo fanjakàna roa izay tena ahitàna jadona tsy azo ihodivirana, Tiorkmenistana sy Ozbekistàna, toa tsy ho afaka hiala eny amin'ny tany akory ireo hetsika sahala amin'izany.